Tag: Chiitiko | Martech Zone
Chitatu, December 12, 2018 Muvhuro, Zvita 17, 2018 Douglas Karr
Vhiki rino ranga richinakidza sezvo ndanga ndichishanda nevamwe vanamuzvinabhizimusi kubva kuSalesforce neimwe kambani kuti ndione kuti ndingaite sei kuvandudza zvirongwa zvevatengi vavo. Gaka rakakura muindasitiri yedu izvozvi nderekuti makambani anowanzove nebhajeti uye zviwanikwa, dzimwe nguva ane maturusi, asi kazhinji anoshaya zano rekubvisa chirongwa chakakodzera chekuuraya. Chikumbiro chimwe chete chavanotora munzira kusvika kune wese mutengi
Munzvimbo yanhasi yemakwikwi yekutengesa, yakasarudzika inopa kusiyanisa mabrands muhondo yekutora kutarisisa kwevatengi. Makambani ari muindasitiri iyi ari kuyedza kuendesa isingakanganwike, yevatengi ruzivo rwekuvaka kuvimbika uye pakupedzisira kuvandudza kutengesa - asi zviri nyore kutaura pane kuzviita. Kugadzira urwu ruzivo rwechiitiko kunoda maturusi ekufunda nezve vatengi vako, kuvaka hukama uye uzive kuti ndeapi marudzi ezvekupihwa zvavanofarira. Izvo zvakakosha zvakaenzana kuziva
Kutevera kuwanikwa kweGoogle kwePostRank, nhoroondo yehukama yakagadziridzwa mukati meGoogle Analytics kuisa mishumo mishanu. Iyi mishumo "zvibodzwa" zvemukati zvichibva pahuwandu hwemashoko akagamuchirwa, zvinongedzo, zvinotaurwa, maTweets, uye mamwe ma media metric Chirevo chega chega chinopa nzwisiso yakasiyana yezvakasiyana zvehukama hwako hwekuzivisa / zvido zvekutarisa. 1. Mhedziso Chirevo, icho chinoratidzira kukanganisa kwesocial media pane zvemukati Chirevo ichi chinokanganisa zvirimo ne "Kudyidzana Kwekupedzisira" uye "Kubatsira Kutaurirana Kwemagariro."